Bit By Bit - Lamesa fiaraha-miasa - koa fanehoan-kevitra
Lamesa fiaraha-miasa avy amin'ny olom-pirenena blends hevitra ny siansa, crowdsourcing, ary iombonana sampam-pitsikilovana. Olom-pirenena momba ny siansa matetika midika hoe "olom-pirenena" (izany hoe, tsy ny mpahay siansa) ao amin'ny siansa dingana (Crain, Cooper, and Dickinson 2014) . Ifarimbonana matetika midika hoe maka ny olana matetika no voavaha ao anatin'ny fikambanana ary fa OUTSOURCING izany ny vahoaka (Howe 2009) . Collective ny faharanitan-tsaina dia midika matetika vondrona ny olona manao miaraka amin'ny fomba izay toa manan-tsaina (Malone and Bernstein 2015) . Nielsen (2012) dia tena tsara-lava fampidirana boky ho any amin'ny herin'ny faobe fiaraha-miasa ho an'ny fikarohana ara-tsiansa.
Maro ny karazam-faobe fiaraha-miasa izay Tsy mety Kendreo ho any amin'ny sokajy telo izay nanolo-kevitra, ary mihevitra aho fa mendrika telo manokana satria mety ho ilaina ao amin'ny fiaraha-monina fikarohana amin'ny fotoana iray. Ohatra iray amin'izany faminaniana tsena, izay mpandray anjara hividy sy ara-barotra izay azo avotana fifanarahana mifototra amin'ny vokatra izay mitranga eto amin'izao tontolo izao (Wolfers and Zitzewitz 2004; Arrow et al. 2008) . Mialoha ny tsena Matetika no ampiasain'ny orinasa sy ny governemanta ho forecasting, ary mialoha ny tsena ihany koa ireo ampiasain'ny mpikaroka ara-tsosialy mba mialoha ny replicability ny nivoaka fianarana ao amin'ny psikolojia (Dreber et al. 2015) .
Ny ohatra faharoa izay tsy mifanaraka tsara ho any an endrika efa rafitra no PolyMath tetikasa, izay mpikaroka niara-niasa nampiasa bolongana sy ny wikis mba hizaha toetra vaovao matematika theorems (Gowers and Nielsen 2009; Cranshaw and Kittur 2011; Nielsen 2012; Kloumann et al. 2016) . Ny PolyMath tetikasa amin'ny fomba sasany mitovitovy amin'ny Netflix Loka, fa amin'ny PolyMath tetikasa mpandray anjara mavitrika kokoa naorina ny ampahany vahaolana hafa.
Ny ohatra fahatelo izay tsy mifanaraka tsara ho any an endrika efa rafitra no fotoana-mila fanentanana toy ny Fiarovana Advanced Research Projects Agency (DARPA) Network Challenge (izany hoe, ny Mena Balloon Challenge). Bebe kokoa momba ireo fotoana mora fanentanana mahita Pickard et al. (2011) , Tang et al. (2011) , ary Rutherford et al. (2013) .
Human computation (Fizarana 5.2)
Ny teny hoe "computation olombelona" avy amin'ny asa atao amin'ny solosaina mpahay siansa, sy ny fahatakarana ny teny manodidina ao ambadiky fikarohana ity dia hanatsara ny fahaizanao haka avy olana izay mety ho tompon'andraikitra manoloana izany. Fa asa sasany, ordinatera no mampino mahery lavitra indrindra amin'ny fahaiza-manao na dia ny olona manam-pahaizana. Ohatra, ao amin'ny chess, solosaina dia afaka nandresy na dia ny tsara indrindra tompo lehibe. Fa-ary izany no tsy tsara ny mpahay siansa ara-tsosialy ankasitrahan'ny-ho an'ny asa hafa, raha ny marina ordinatera dia tena ratsy noho ny olona. Amin'ny teny hafa, izao ankehitriny izao ianao na dia tsara kokoa noho ny fitaovana be pitsiny indrindra solosaina amin'ny asa sasany momba fanodinana ny sary, lahatsary, raki-peo, ary ny soratra. Noho izany, araka ny hevitr'ilay fanoharana momba ny mahafinaritra XKCD sariitatra-misy asa izay mora ho an'ny solosaina sy mafy ho an'ny olona, ​​fa misy ihany koa ny asa izay sarotra ho an'ny solosaina sy mora ho an'ny olona (Sary 5.13). Computer mpahay siansa miasa amin'ny mafy ireo-fa-solosaina-mora-for-olombelona asa, noho izany, tonga saina fa ny olombelona mety tafiditra ao ny kajy amin'ny solosaina, dingana. Toy izao ny fomba Luis of Ahn (2005) voalaza olombelona computation rehefa namorona ny teny voalohany ao amin'ny dissertation: "ny modelim ho an'ny olona mampiasa fikarakarana hery hamaha olana fa tsy mbola ordinatera afaka mamaha."
Figure 5,13: Fa asa sasany solosaina dia mahavariana, indrindra ny fahaizana ny olona manam-pahaizana manokana. Nefa, satria asa hafa, olon-tsotra ny olombelona dia afaka outperform na dia be pitsiny rafitra solosaina. Olana goavana izay mahakasika asa izay sarotra ho an'ny solosaina sy mora ho an'ny olombelona dia tsara ho an'ny olombelona mifanaraka computation. Ampiasaina araka ny teny voalaza eto: http://xkcd.com/license.html
Izany famaritana FoldIt-izay voalaza ao amin'ny fizarana mikasika ny antso misokatra-azo heverina ho olombelona tetikasa computation. Na izany aza, dia misafidy ny nosokajiana ho toy ny misokatra FoldIt antso satria mitaky fahaiza-manao manokana sy mitaky ny vahaolana tsara indrindra nandray anjara fa tsy mampiasa mivaky-hampihatra-manambatra ny tetika.
Fa tsara boky lava fitsaboana ny olombelona computation, amin'ny ankapobeny ny tena heviny ny teny hoe, jereo ny Law and Ahn (2011) . Toko faha-3 amin'ny Law and Ahn (2011) dia manana mahaliana momba ny miray tsikombakomba sarotra kokoa noho ireo dingana ao amin'ity toko ity.
Ny teny hoe "hitresaka-mampihatra-mitambatra" no nampiasain'i Wickham (2011) mba hamaritana ny paik'ady ho an'ny antontan'isa computing, fa tsara hoe nambabo ny dingana maro olombelona tetikasa computation. Ny fivakisana-mampihatra-manambatra ny tetika dia mitovy amin'ny rafitra MapReduce nitombo tao Google (Dean and Ghemawat 2004; Dean and Ghemawat 2008) .
Nahira-tsaina olombelona roa computation tetikasa izay tsy manana toerana malalaka mba hiresaka momba ny ESP Game (Ahn and Dabbish 2004) sy reCAPTCHA (Ahn et al. 2008) . Samy amin'ireo tetikasa ireo nahita fomba famoronana mba handrisika ny mpandray anjara mba hanome etikety eo amin'ny sary. Na izany aza, roa ireo ihany koa ny tetikasa natsangana etika fanontaniana satria, tsy toy ny kintana Zoo, mpandray anjara ao amin'ny ESP Game sy reCAPTCHA tsy mahalala ny antontan-kevitra dia ampiasaina (Lung 2012; Zittrain 2008) .
Aingam-panahy avy amin'ny ESP Game, maro ny mpikaroka no niezaka hanana ny hafa "lalao amin'ny tanjona" (Ahn and Dabbish 2008) (izany hoe, "olombelona ara-computation lalao" (Pe-Than, Goh, and Lee 2015) ) izay mety ho ampiasaina mba hamaha ny olana isan-karazany ny hafa. Inona ireo "lalao amin'ny tanjona" ao iraisana dia ny hoe miezaka mba hahatonga ny asa tafiditra amin'ny olombelona computation mahafinaritra. Noho izany, raha ny ESP Game mizara izany fisarahana-mampihatra-mitambatra rafitra amin'ny Galaxy Zoo, dia mitovy amin'ny fomba mpandray anjara no nahatonga-mahafinaritra vs. te hanampy ny siansa.
Ny famaritana ny Galaxy Zoo mitaona amin'ny Nielsen (2012) , Adams (2012) , Clery (2011) , ary Hand (2010) , ary ny fanolorana ny fikarohana tanjon'ny Galaxy Zoo dia notsorina. Bebe kokoa momba ny tantaran'ny vahindanitra fanasokajiana amin'ny astronomia sy ny Galaxy Zoo mitohy fomban-drazana ity, jereo ny Masters (2012) sy Marshall, Lintott, and Fletcher (2015) . Fanorenana ao amin'ny Galaxy Zoo, ny mpikaroka vita Galaxy Zoo 2 izay nanangona mihoatra ny 60 tapitrisa pitsiny kokoa morphological sokajy avy amin'ny mpiasa an-tsitrapo (Masters et al. 2011) . Ankoatra izany, dia sampany sy rantsany ho any olana ivelan'ny Morphologie kintana iray ao anatin'izany ny mamantatra ho etỳ ambonin'ny ny volana, mitady planeta, ary transcribing antitra antontan-taratasy. Amin'izao fotoana izao, ny tetikasa rehetra Nangonina ao amin'ny www.zooniverse.org (Cox et al. 2015) . Ny iray amin'ireo tetikasa-Snapshot Serengeti-manome porofo fa Galaxy Zoo-karazana tetikasa sary fanasokajiana koa hatao ho tontolo iainana fikarohana (Swanson et al. 2016) .
Fa ny mpikaroka mikasa ny hampiasa ny madinika asa asa tsena (ohatra, Amazon Mechanical Turk) ho olombelona computation tetikasa, Chandler, Paolacci, and Mueller (2013) sy Wang, Ipeirotis, and Provost (2015) manolotra torohevitra tsara amin'ny asa famolavolana sy ny hafa mifandraika olana.
Mpikaroka liana amin'ny famoronana ny zavatra aho hoe taranaka faharoa computation olombelona rafitra (ohatra, ny rafitra izay mampiasa olona etikety mba hampiofana ny milina fianarana modely) mety ho liana amin'ny Shamir et al. (2014) (ho ohatra ny fampiasana feo) sy Cheng and Bernstein (2015) . Ary koa, ireo tetikasa azo atao amin'ny antso misokatra, izay mpikaroka hifaninana ny hamorona milina modely fianarana ny lehibe indrindra vinavina fampisehoana. Ohatra, ny Galaxy Zoo ekipan'ny nihazakazaka antso misokatra ary nahita fomba fiasa vaovao izay outperformed ny iray mivoatra any Banerji et al. (2010) ; jereo Dieleman, Willett, and Dambre (2015) ho an'ny antsipirihany.
Open antso (Fizarana 5.3)
Open antso dia tsy vaovao. Raha ny marina, iray amin'ireo fanta-daza indrindra antso taonjato misokatra indray ny 1714, rehefa ny Parlemanta Grande-Bretagne namorona ny Longitude Loka ho an'ny olona izay mety hanana fomba iray hamaritana ny Longitude of-tsambo teny an-dranomasina. Ny olana stumped maro ny lehibe indrindra mpahay siansa ny andro, anisan'izany ny Isaac Newton, ary ny mandresy vahaolana tamin'ny farany napetraky ny mpanao famantaranandro avy any ambanivohitra, izay nanatona ny olana hafa avy amin'ny mpahay siansa izay nifantoka tamin'ny vahaolana izay sao tafiditra astronomia (Sobel 1996) . Rehefa avy amin'io tantara io, ny antony iray izay misokatra antso dia heverina fa miasa tsara izy ireo dia manome fahafahana hahazo ny olona amin'ny fomba fijery samy hafa sy ny fahaiza-manao (Boudreau and Lakhani 2013) . Jereo ny Hong and Page (2004) sy ny Page (2008) bebe kokoa momba ny hasarobidin'ny fahasamihafana eo amin'ny famahana olana.
Tsirairay ny antso misokatra tranga ao amin'ny toko faha-dia mitaky kely ny fanazavana fanampiny ho an'ny antony an'ny ao ity sokajy ity. Voalohany, fomba iray izay manavaka ny computation olombelona sy ny antso misokatra tetikasa dia na ny output dia eo ho eo ny vahaolana rehetra (olona computation) na ny vahaolana tsara indrindra (misokatra antso). Ny Netflix Loka dia somary mamitaka amin'io lafiny io ny vahaolana tsara indrindra, satria nivadika ho raitra iray eo ho eo ny tsirairay vahaolana, dia nanatona niantso ny Ensemble vahaolana (Bell, Koren, and Volinsky 2010; Feuerverger, He, and Khatri 2012) . Avy amin'ny fomba fijery ny Netflix, na izany aza, ny olona rehetra tsy maintsy manao dia haka ny vahaolana tsara indrindra.
Faharoa, ny famaritana ny olona sasany computation (ohatra, Von Ahn (2005) ), dia tokony ho heverina FoldIt olombelona tetikasa computation. Na izany aza, dia misafidy ny nosokajiana ho toy ny misokatra FoldIt antso satria mitaky fahaiza-manao manokana sy mitaky ny vahaolana tsara indrindra anjara, fa tsy mampiasa mivaky-hampihatra-manambatra ny tetika.
Farany, misy afaka hilaza fa ataon'ny mpiara-to-patanty dia ohatra ny nizara fanangonana antontan'isa. I misafidy ny ahitana azy io ho toy ny antso misokatra satria misy fifaninanana-toy ny rafitra sy ny tsara indrindra ihany no fanomezana ampiasaina (kosa amin'ny nizara fanangonana antontan'isa, ny hevitra ny tsara sy ny ratsy fanomezana dia tsy mazava).
Bebe kokoa momba ny Netflix Loka, jereo ny Bennett and Lanning (2007) , Thompson (2008) , Bell, Koren, and Volinsky (2010) , ary Feuerverger, He, and Khatri (2012) . Bebe kokoa amin'ny FoldIt jereo, Cooper et al. (2010) , Andersen et al. (2012) , ary Khatib et al. (2011) ; ny famaritana ny FoldIt mitaona amin'ny famaritana in Nielsen (2012) , Bohannon (2009) , ary Hand (2010) . Bebe kokoa amin'ny ataon'ny mpiara-to-patanty, jereo ny Noveck (2006) , Bestor and Hamp (2010) , Ledford (2007) , ary Noveck (2009) .
Mitovy amin'ny vokatry ny Glaeser et al. (2016) , Mayer-Schönberger and Cukier (2013) , Chapter 10 tatitra tombony lehibe eo amin'ny famokarana ny trano mpanara-maso any New York City rehefa fisafoana dia tarihin'ny vinavina modely. Ao New York City, ireo modely vinavina dia nanorina ny tanàna mpiasa, fa amin'ny toe-javatra hafa, misy afaka sary an-tsaina fa mety ho namorona na hatsaraina amin'ny antso misokatra (ohatra, Glaeser et al. (2016) ). Na izany aza, iray lehibe amin'ny vinavina momba modely nampiasaina mba hahatanteraka loharano dia ny modely manana ny hery anaty mba hanamafisana efa misy mifanavakavaka. Maro ny mpikaroka efa mahalala "fako ao, fako avy", ary ny vinavina ohatra dia mety ho "fitongilanana eo, fitongilanana avy." Jereo ny Barocas and Selbst (2016) sy O'Neil (2016) bebe kokoa momba ny loza ateraky ny vinavina modely nanorina miaraka amin'ny angon-drakitra mitongilana fanofanana.
Olana iray izay mety hanakana ny governemanta amin'ny fampiasana fifaninanana misokatra dia angon-drakitra fa mitaky fanafahana, izay mety hitarika ho amin'ny fiainana manokana fanitsakitsahana. Raha mila fanazavana momba ny fiainana manokana sy ny angon-drakitra misokatra nafahana tamin'ny antso mahita Narayanan, Huey, and Felten (2016) sy ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny Chapter 6.
Nizara fanangonana antontan'isa (Fizarana 5.4)
Ny famaritana ny eBird mitaona amin'ny famaritana in Bhattacharjee (2005) sy Robbins (2013) . Bebe kokoa amin'ny fomba fampiasana mpikaroka antontan'isa modely mba handinika eBird tahirin-kevitra mahita Hurlbert and Liang (2012) sy Fink et al. (2010) . Bebe kokoa momba ny tantaran'ny olom-pirenena eo amin'ny ornothology siansa, jereo ny Greenwood (2007) .
Bebe kokoa momba ny Malawi Journals Project, jereo ny Watkins and Swidler (2009) sy Kaler, Watkins, and Angotti (2015) . Ary bebe kokoa mifandray amin'ny tetikasa any Afrika Atsimo, jereo ny Angotti and Sennott (2015) . Raha mila mampiasa ohatra ny fikarohana tahirin-kevitra avy ao amin'ny Malawi Journals Tetikasa jereo Kaler (2004) sy Angotti et al. (2014) .
Nanaovany anao manokana (Fizarana 5.5)
Ny fomba fanatitra famolavolana toro-hevitra dia inductive, miorina amin'ny ohatra ny fahombiazana, ary tsy faobe tetikasa fiaraha-miasa izay henoko momba. Misy ihany koa ny renirano ny fikarohana miezaka mba hampihatra bebe kokoa ara-tsaina ara-tsosialy ankapobeny ny fampianarana teoria vondrom-piarahamonina an-tserasera izay mifanaraka amin'ny famolavolana ny tetikasa fiaraha-miasa faobe, jereo, ohatra, Kraut et al. (2012) .
Momba mandrisika mpandray anjara, dia raha ny marina tena mamitaka vao hahalala mihitsy hoe nahoana ny olona handray anjara amin'ny faobe fiaraha-miasa tetikasa (Nov, Arazy, and Anderson 2011; Cooper et al. 2010, Raddick et al. (2013) ; Tuite et al. 2011; Preist, Massung, and Coyle 2014) . Raha mikasa ny handrisika ny mpandray anjara amin'ny fandoavam-bola amin'ny asa madinika asa tsena (ohatra, Amazon Mechanical Turk) Kittur et al. (2013) manome toro-hevitra vitsivitsy.
Momba manampy Gaga, fa ohatra ny tsy ampoizina bebe kokoa hitan'ny mivoaka avy ao Zoouniverse tetikasa, jereo ny Marshall, Lintott, and Fletcher (2015) .
Momba ny maha-etika, ny sasany teny fampidirana ankapobeny tsara ny raharaha tafiditra dia Gilbert (2015) , Salehi et al. (2015) , Schmidt (2013) , Williamson (2016) , Resnik, Elliott, and Miller (2015) , ary Zittrain (2008) . Fa ny olana manokana mifandraika amin'ny olana ara-pitsarana amin'ny vahoaka mpiasa, dia jereo Felstiner (2011) . O'Connor (2013) miresaka fanontaniana momba ny etika niandraikitra ny fikarohana, rehefa ny anjara ny mpikaroka sy ny mpandray anjara hampanjavozavo. Fa ny olana mifandraika amin'ny fizarana rakitra sady miaro ny olom-pirenena momba ny siansa participats amin'ny tetikasa, jereo ny Bowser et al. (2014) . Samy Purdam (2014) sy Windt and Humphreys (2016) manana etika fifanakalozan-kevitra momba ny olana ao amin'ny nizara fanangonana antontan'isa. Farany, ny ankamaroan'ny tetikasa manaiky fanomezana, nefa tsy manome voninahitra ny mpandray anjara-mpamorona. Ao Foldit, ny Foldit mpilalao Matetika no voatanisa ho toy ny mpanoratra (Cooper et al. 2010; Khatib et al. 2011) . Amin'ny antso misokatra tetikasa, ny mandresy mpandray anjara dia afaka manoratra matetika ny taratasy mamaritra ny vahaolana (ohatra, Bell, Koren, and Volinsky (2010) sy Dieleman, Willett, and Dambre (2015) ). Ao amin'ny Galaxy Zoo fianakaviana ny tetikasa, tena mavitrika sy manan-danja indraindray mpandray anjara ireo nasaina mba ho mpiara-mpanoratra ny taratasy. Ohatra, Ivan Terentev sy Tim Matorny, roa Radio Galaxy Zoo mpandray anjara avy any Rosia, dia mpiara-mpanoratra ny iray amin'ireo taratasy izay nitsangana niala izany tetikasa (Banfield et al. 2016; Galaxy Zoo 2016) .